यी अक्षरबाट नाम आउने पुरुषले राख्छन् पत्नीलाई रानी बनाएर ! | सुदुरपश्चिम खबर
यी अक्षरबाट नाम आउने पुरुषले राख्छन् पत्नीलाई रानी बनाएर !
हरेक युवतीको चाहना हुन्छ, आफ्नो पार्टनरले सबै आफूलाई आँखामा राखिराखोस्। त्यसैले त युवकलाई मन पराएसँगै उनीहरुको आनीबानी पनि बुझ्ने प्रयास गर्दछन्।
के तपाईलाई थाहा छ नामको पहिलो अक्षरबाट पनि युवकका बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। आज हामी तपाईलाई केही यस्ता नामवाला पुरुषका बारेमा बताउँदैछौँ, जो बेस्ट पति साबित हुने गर्दछन्।
भि बाट नाम हुने पुरुष
भि बाट नाम आउने पुरुष पत्नी प्रेमी हुने गर्दछन्। यी पुरुषले आफ्नो पत्नीका लागि हर कदम साथ दिने गर्दछन्। यस्ता व्यक्ति हेर्दा आकर्षक हुनुका साथसाथै राम्रो पति पनि साबित हुने गर्दछन्।
एस बाट नाम आउने पुरुष
एस बाट नाम आउने पुरुष निकै जिद्दी प्रवृत्तिका हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्ति बाहिर हेर्दा निकै कठोर हुने गर्दछन् तर जुन युवतीसँग प्रेम गर्छन् उसप्रति बफादार मानिन्छन्। उनीहरुले आफ्नो पार्टनरका नजिक प्रेम प्रकट गर्दैनन्, तर हरेक आवश्यकताको राम्रो ध्यान राख्दछन्।
आर बाट नाम आउने पुरुष
आर बाट नाम आउने पुरुष आफ्नो पार्टनरका लागि आवश्यक भन्दा बढी सिरियसल हुने गर्दछन्। आफ्नो पार्टनरलाई खुसी बनाउनका लागि जो सुकै गर्न तयार हुने गर्दछन्। आफ्नो पत्नीको आवश्यकता बोल्ने भन्दा पहिले सम्झिने गर्दछन्।
ए बाट नाम आउने पुरुष
ए बाट नाम आउने पुरुष निकै मस्ती गर्ने खाले हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिको सेन्स अफ ह्यूमर निकै राम्रो हुने गर्दछ। यस्ता पुरुषले आफ्नो पत्नीलाई निकै कुरा सिकाएर राख्ने गर्दछन्। यस्ता पुरुषलाई मानिसले जे सुकै भनेपछि असलमा यिनीहरु उत्कृष्ट पति हुने गर्दछन्।(gnewsnepal बाट सभार)
सुदूरपश्चिममा करिब एक साता अनियमित रुपमा विद्युत कटौती हुनसक्ने !!